रेखाको कमाईको स्रोत के हो ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
एक समय बलिउडमा आफ्नो दबदबा कायम गरेकी सुन्दरी अभिनेत्री रेखाले आफ्नो अभिनय करिअरमा नेम र फ्रेम दुवै कमाइन् । ४० वर्षको करिअरमा १८० भन्दा बढी चलचित्रमा काम गरेकी उनले तीन पटक फिल्म फेयर अवार्ड पनि प्राप्त गरेकी छन् । पछिल्लो समय रेखा कुनै चलचित्र वा विज्ञापनमा देखिएकी छैनन् ।
एउटा कलाकारको आयस्रोत भनेकै चलचित्र र विज्ञापन हो । तर, रेखाले पछिल्लो समय यी कुनै काम गरेकी छैनन् । आखिर रेखाको कमाईको स्रोत के हो ? उनी कसरी आफ्नो जीवनशैली कायम गरिरहेकी छन् ? भारतीय मिडियामा उल्लेख भए अनुसार, उनको मुम्बई र दक्षिण भारतमा धेरै सम्पत्ति छ ।
रेखाले भारतका विभिन्न ठाउँमा घर खरिद गरेकी छन्, जसलाई उनले भाडामा दिएकी छन् । यी घरबाट उनले राम्रो कमाई गर्छिन् । उनी राज्यसभा सदस्य पनि हुन् । राज्यको सदस्य भएर रेखाले हरेक महिना १ लाख रूपैयाँ पाउँछन् अर्थात् एक बर्षमा १२ लाख कमाउँछिन् ।
रेखालाई विभिन्न कार्यक्रम तथा इभेन्टमा बोलाउने गरिन्छ । उनी जुन कार्यक्रममा पाहुनाको रूपमा जान्छिन्, त्यसबाट ठूलो रकम बुझ्ने गरेकी छन् । उनले वर्षौंदेखि बलिउडमा काम गरिरहेकी छन् । उनले जहिले पनि बचतमा बढी ध्यान दिएकी छन् । उनले धेरै बैंकहरुमा निश्चित बचत गराएकी छन् ।
रेखा विज्ञापनमा विरलै देखिन्छन् । तर, उनको नाम वा तस्विर विज्ञापनमा प्रयोग गरिए रेखाले निश्चित शुल्क लिन्छिन् । टिभी कार्यक्रम होस् वा चलचित्र, रेखा आफ्नो विशेष उपस्थितिमा धेरै चार्ज गर्छिन् । कुनै पनि रियलिटी शोमा अतिथि बन्दा पनि उनले राम्रो पैसा लिने गरेकी छन् ।